အရှေ့ပါကစ္စတန်တွင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် များအား လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု ( ဘာသာပြန်) by Khin Mar Swe | Development Global
အရှေ့ပါကစ္စတန်တွင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် များအား လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု ( ဘာသာပြန်) by Khin Mar Swe
ဘင်္ဂလီကျူးကျော်သူများကို တားဆီးဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့’s Photos · ဘင်္ဂလီကျူးကျော်သူများကို တားဆီးဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့’s Page Previous · Next
= = = အရှေ့ပါကစ္စတန်တွင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအား လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု = = = (ဘာသာပြန်)
အရှေ့ပါကစ္စတန်တွင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအား လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု (ရှရီနမ်ဒမ် ဗီယာစ်)
… Hindu Genocide in East Pakistan
ဤဆောင်းပါးသည် (၁၉၇၁)ခုနှစ်တွင် အရှေ့ပါကစ္စတန်၌ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ၂.၅ သန်းခန့် အသုတ်သင်ခံရမှု အကြောင်းကို လေ့လာတင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အစိုးရ စီမံကိန်းဌာန၊ ဗြိတန်းနီးကား စွယ်စုံကျမ်း၊ အထက်လွှတ်တော်အမတ် အယ်ဒွတ်ကနေဒီ၏ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အထက်လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေး ကော်မတီသို့ အစီရင်ခံစာ၊ နယူးစ်ဝိခ် မဂ္ဂဇင်း၊ နယူးယောက်တိုင်းမ်စ် သတင်းစာ အစရှိသည်တို့က ပေးထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို ကိုးကားပါသည်။ (၁၉၇၁)ခုနှစ်တွင် အရှေ့ပါကစ္စတန်၌ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် သန်းချီ၍ အသတ်ခံရခြင်းကို ပြသရန်အတွက် ဤ သတင်းအချက်အလက်နှင့် အခြေခံ ဂဏန်းသင်္ချာပညာတို့အား အသုံးပြုထားပါသည်။
This article refers to information provided by Dept. of Planning of Government of Bangla Desh, Encyclopedia Britannica, Senator Edward Kennedy’s report to the U.S. Senate Judiciary Committee, Newsweek, New York Times, etc. This information and elementary math are used to show that indeed millions of Hindus were killed in East Pakistan in 1971.
= အနှစ်ချုပ် အချက်အလက်များ =
ယခင်က အရှေ့ပါကစ္စတန် ဖြစ်သော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် (၁၉၇၁)ခုနှစ် စစ်တပ်ဖိနှိပ်မှုကြောင့် ဒုက္ခသည် (၁၀)သန်း အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်မှု ဖြစ်စေခဲ့သည်ကို အများသိကြပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေးစားလက်ခံကြသည့် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် သတင်း ဌာနများက သေဆုံးသူ အရေအတွက်ကို (၃)သန်းဟု ဆိုသည်။ သို့ရာတွင် ထို စာရင်းအင်းများကို ကြည့်လျှင် ပေါ်လွင် ထင်ရှားလာသည့် အချက်မှာ – အရှေ့ပါကစ္စတန်၏ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ထုကြီး တစ်ခုလုံးသည် (၁၉၇၁)ခုနှစ်က (၉)လကြာ ဖိနှိပ်မှုအတွင်း၌ ပါကစ္စတန် စစ်တပ်၏ ပစ်မှတ်ဖြစ်သည် – ဆိုသော အချက်ဖြစ်၏။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရနှင့် အမေရိကန်အစိုးရတို့၏ ထုတ်ပြန်ချက်များမှ ရရှိသော စာရင်းအင်းများကို အသုံးပြု၍ ဤဆောင်းပါးက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်များအနက် လူဦးရေ (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ ဖြစ်ပြီး အသတ်ခံရသူ (၃)သန်းအနက် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းမှာလည်း ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များပင်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ (၁၉၇၁)ခုနှစ်က အရှေ့ပါကစ္စတန်ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိစ္စရပ်များမှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဒုက္ခသည်တို့၏ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအား မျိုးဖြုတ် သတ်ဖြတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
= ရည်ညွှန်းချက် (၁၀)ခု =
ဗြိတန်းနီးကား စွယ်စုံကျမ်း၊ (စာရင်းအင်းများအတွက်) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အစိုးရ စီမံကိန်းဌာန၊ နယူးစ်ဝိခ် မဂ္ဂဇင်း၊ နယူးယောက်တိုင်းမ်စ် သတင်းစာ၊ အထက်လွှတ်တော်အမတ် အယ်ဒွတ်ကနေဒီ၏ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အထက်လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေး ကော်မတီသို့ အစီရင်ခံစာ
= နိဒါန်း =
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် (၁၉၇၀)ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အ၀ါမီအဖွဲ့ချုပ်က အမတ်နေရာ (၁၆၉)နေရာ အနက် (၁၆၇)ကို အနိုင်ရပြီး အရှေ့ပါကစ္စတန်ဒေသတွင် လူထုမဲ (၈၀%)ကျော် ရရှိသည်။ သင်္ချာနည်းအရဆိုလျှင် အ၀ါမီအဖွဲ့ချုပ်သည် ပါကစ္စတန် အမျိုးသား ညီလာခံတွင် အများစု ရရှိသည် (စုစုပေါင်း ၃၁၃ နေရာတွင် ၁၆၇)။
In the December 1970 general election in Pakistan, Awami League won 167 of 169 seats and over 80 % of popular votes in East Pakistan. Numerically Awami League had an absolute majority of seats in the Pakistan National Assembly (167 of the total 313 seats)
(၁) သမိုင်းကြောင်းအရ အရှေ့ပါကစ္စတန်သည် စုစုပေါင်း သယံဇာတ၏ (၃၆%)ကိုသာ ခွဲဝေခံစားခွင့် ရှိပြီး ပါကစ္စတန်ပြည်ထောင်စု ဖယ်ဒရယ်အစိုးရတွင် နေရာ (၂၀%)ကိုသာ ရသည်။
(1). Historically, East Pakistan was allocated only 36 % of the total resources and East Pakistanis occupied only 20 % of the positions in the federal government in the United Pakistan
(၂) လူပေါင်း (၂၅၀,၀၀၀)ကျော် သေဆုံးခဲ့သော(၁၉၇၀) နိုဝင်ဘာလတွင် ကြောက်မက်ဖွယ် ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်း အပြီး အရှေ့ပါကစ္စတန်ဒေသအပေါ် ပါကစ္စတန်အစိုးရ၏ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုက အရှေ့ပါကစ္စတန် လူထုအား သူစိမ်းပြင်ပြင်ကဲ့သို့ စိတ်ခံစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
(2). The Pakistani government’s apathy towards East Pakistan afteraterrible cyclone in November 1970 in which over 250,000 people died, had alienated East Pakistani people. The solid outcome of the 1970 elections for Awami League created an alternative power center for an already alienated people.
အရှေ့နှင့် အနောက် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံရေးသမားများ အကြား ကွဲပြားခြားနားမှုသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဓိက အရေးအခင်းတစ်ရပ်အဖြစ်သို့ ရုတ်ခြည်းတိုးတက်သွားခဲ့သည်။ (၁၉၇၁)ခုနှစ် မတ်လ (၂၅)ရက်နေ့တွင် သမ္မတ ယာယာခန်၏ အမိန့်ဖြင့် ပါကစ္စတန်စစ်တပ်သည် အကြမ်းဖက်စစ်ဆင်ရေး တစ်ရပ်ကို စတင်ခဲ့ရာ (၁၉၇၁)ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယစစ်တပ်ထံ နောက်ဆုံး လက်နက်ချရသည့်အချိန်ထိ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။
The differences between the East and West Pakistani politicians snowballed intoamajor international crisis. On March 25, 1971 Pakistani army on President Yahya Khan’s orders initiatedacampaign of terror which was to last till its final surrender to the Indian army on December 17, 1971.
ပါကစ္စတန် စစ်တပ်၏ ဤအကြမ်းဖက်မှု စစ်ဆင်ရေးက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည် (၁၀)သန်း အိန္ဒိယ နယ်ခြားကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှု ဖြစ်စေခဲ့ပြီး (အထက်လွှတ်တော်အမတ် အက်ဒွတ်ကနေဒီ၏ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အထက်လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေး ကော်မတီသို့ အစီရင်ခံစာ- အညွှန်း – ၃)၊ ကယ်ဆယ်ရေး ဌာန အများစု၏ အစီရင်ခံစာများနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရ၏ တရားဝင်ခန့်မှန်းချက် အပေါ် အခြေခံ တွက်ချက်မှုအရ (၃)သန်း အသတ်ခံရစေသည် (အညွန်း – ၄၊ ၅)။
This terror campaign by Pak army resulted in 10 million Bangla Deshi refugees crossing over to India (per Senator Edward Kennedy’s report to the U.S. Senate Judiciary Committee (3)) and3million killed (4,5) based on reports from most relief agencies and official Bangla Desh government estimate.
သို့ရာတွင် ဒုက္ခသည်များနှင့် သေဆုံးသူများအား မည်သည့်နေရာတွင်မျှ ဘာသာရေးအရ ခွဲခြားဖော်ပြမရှိပေ။ အိန္ဒိယ သတင်းမီဒီယာတို့မှ အစီရင်ခံများတွင် ဤသို့သော သတင်းအချက်အလက်မျိုးကို မဖော်ပြဘဲ ကျန်နေရစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဤသို့သော သတင်းထုတ်ပြန်မှုတို့က အရှေ့ပါကစ္စတန်ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဟိန္ဒူဘာသာတို့အား မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်မှုတည်းဟူသော ပိုမို ယုတ်မာကောက်ကျစ်သော အမှန်တရားကို ယေဘုယျအားဖြင့် ကမ္ဘာမြင်ကွင်းမှ၊ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတို့၏ မြင်ကွင်းမှ ဖုံးကွယ်ထားသလို ဖြစ်နေခဲ့ပေသည်။
However the religious mix of both the refugees and the dead is nowhere emphasized anywhere. This significant information has particularly been absent in the reports from Indian News Media. This selective news dissemination has keptamore sinister truth of Hindu genocide in East Pakistan hidden from the world in general and Indians in particular.
= ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့သည် ပါကစ္စတန် စစ်တပ်၏ အထူးရွေးချယ်ထားသော ပစ်မှတ်ဖြစ်သည် =
(၁၉၇၁)ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁)ရက် နေ့စွဲတပ်ထားသည့် သူ၏ အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်တွင် အထက်လွှတ်တော် အမတ် အက်ဒွက် ကနေဒီက ရေးသားထားသည်မှာ (အညွှန်း -၆) – “အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ ကွင်းဆင်းကောက်ယူသော အစီရင်ခံများ၊ မရေမတွက်နိုင်သည့် သတင်းသမားတို့၏ ကိုယ်တွေ့မျက်မြင် မှတ်တမ်းများ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဲ့သို့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အစီရင်ခံစာများနှင့် ဆပ်ကော်မတီက ထပ်မံ၍ ရရှိသမျှ သတင်းအချက်အလက်များ အားလုံးတို့က အရှေ့ဘင်္ဂေါ(အရှေ့ ပါကစ္စတန်)ကို ဆွဲညှစ်ချုပ်ကိုင်နေသော အကြောက်တရားလွှမ်းမိုးစေခြင်းဖြင့်အုပ်စိုးမှုကို သက်သေပြ မှတ်တမ်းပြုလျှက် ရှိသည်။”
= HINDUS IN EAST PAKISTAN WERE SPECIAL TARGET OF PAK ARMY =
‘Field reports to the U.S. Government, countless eye-witness journalistic accounts, reports of International agencies such as World Bank and additional information available to the subcommittee document the reign of terror which grips East Bengal (East Pakistan).
အပြင်းထန်ဆုံးထိခိုက်ရသူတို့မှာ ဟိန္ဒူ လူ့အသိုက်အ၀န်းဝင်များဖြစ်ပေသည်။ သူတို့၏ မြေယာများနှင့် ဈေးဆိုင်နေရာများ လုယက်သိမ်းပိုက်ခံရသည်။ စနစ်တကျ သတ်ဖြတ်သုတ်သင်ခြင်းကို ခံရသည်။ အချို့နေရာများ၌ [ဟိန္ဒူအတိုကောက်] “အိပ်ခ်ျ” အမှတ်အသားကို အ၀ါရောင်ဆေးဖြင့် ရေးခြယ်ထားခဲ့ကြသည်။ စစ်ဥပဒေကို အကြောင်းပြု၍ ဤလုပ်ရပ်အားလုံးကို (ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်) အစ္စလာမ်မာဘတ်မှ တရားဝင် ခွင့်ပြုခြင်း၊ အမိန့်ပေးခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုသည်။
HARDEST HIT HAVE BEEN MEMBERS OF THE HINDU COMMUNITY WHO HAVE BEEN ROBBED OF THEIR LANDS AND SHOPS, SYSTEMATICALLY SLAUGHTERED, AND IN SOME PLACES, PAINTED WITH YELLOW PATCHES MARKED “H”. All of this has been officially sanctioned, ordered and implemented under martial law from Islamabad. ..’ (emphasis added by author of this article).
(လူသတ်ကွင်းများ စာအုပ်ရေးသူ) ပူလစ်ဇာဆုရှင် သတင်းသမား ဆစ်ဒနီ ရှန်းဘဂ်သည် (၁၉၇၁)ခုနှစ် စစ်တပ်၏ ဖိနှိပ်မှု ကာလ နှင့် (၁၉၇၁)ခုနှစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စစ်ပွဲ ကာလအတွင်းတွင် နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းစာ၏ (အရှေ့ ဘင်္ဂလားမြို့တော်) ဒါကာမြို့ အခြေစိုက် သတင်းထောက်ဖြစ်သည်။ သူ၏ မူပိုင်သတင်း “နစ်ဆင် မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်နေသော ပါကစ္စတန် သုတ်သင်မှုကြီး”တွင် မစ္စတာ ရှန်းဘတ်က ရေးသားထားသည်မှာ –
“စစ်ကို ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ပြီး အိန္ဒိယစစ်သားများကို လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကယ်တင်ရှင်များအဖြစ် လူထု၏ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုမှုကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခွင့် ရခဲ့သည်။ ……….. နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံအနှံ့ကို လမ်းရှိသ၍ လှည့်လည်ကြည့်ရှုသောအခါ ပါကစ္စတန်တို့၏ သမိုင်းတွင်မည့် လုပ်ရပ်များကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီး တွေ့ရတော့သည်။ တစ်မြို့ပြီး တစ်မြို့ တွေ့ရသည်မှာ လှံစွပ်များ၊ ကျည်ဆံများနှင့် တင်းပုတ်တို့ဖြင့် လူများကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သော သုတ်သင်သတ်ဖြတ်သည့် နေရာများဖြစ်သည်။ အချို့ မြို့များတွင် သုတ်သင်သတ်ဖြတ်မှုများကို နေ့စဉ်အစီအစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။”
ထိုအချိန်သည် စစ်ပြီးဆုံးပြီးနောက် တစ်လအကြာ (၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ)တွင် ဖြစ်သည်။……….. များပြားစွာသော လမ်းဘေးတို့တွင် လူအရိုးများ ပြန့်ကြဲနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ထို လူသတ်ကွင်းပြင်များတွင် သွေးစွန်းနေသော အ၀တ်များ၊ လူတို့၏ ဆံပင်ထွေးများမှာ ခြုံပုတ်များ၌ ငြိတွယ်လျှက်ရှိနေပေသေးသည်။ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်စွမ်း နည်းပါးသေးသော ငယ်ရွယ်လှသည့် ကလေးငယ်များသည် အရိုးခေါင်းများဖြင့် အတုမြင် အတတ်သင်ကာ စိတ်ကူးယဉ်ကစားနည်းများကို ကစားလျှက်ရှိကြသည်။ အခြားကျန်ရစ်သော အမှတ်အသားတို့မှာ မူစလင် စစ်တပ်၏ အထူးပြု ပစ်မှတ်များဖြစ်သော ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့၏ နေအိမ်များတွင် ပါကစ္စတန်တို့က ရေးသုတ်ခဲ့သော အ၀ါရောင် “အိပ်ခ်ျ”စာလုံးများ ဖြစ်သည် (အညွန်း – ၇)။
ထို့ကြောင့် တစ်ခုက (၁၉၇၁)ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့ မတိုင်မီဖြစ်ပြီး၊ အခြားတစ်ခုက (၁၉၇၂)ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလက ဖြစ်သည့် လွတ်လပ်သော လေ့လာချက်နှစ်ခုက အရှေ့ပါကစ္စတန်ဒေသမှ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့၏ အိမ်များကို အ၀ါရောင် “အိပ်ခ်ျ”စာလုံးများဖြင့် အမှတ်အသားပြုခဲ့ကြပြီး ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များသည် ပါကစ္စတန် စစ်တပ်၏ အထူးပြု ပစ်မှတ်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုထားပေသည်။ အခြေအနေမှာ (၁၉၃၉)ခုနှစ်မှ (၁၉၄၄)ခုနှစ်အထိ နာဇီတို့က ဂျူးလူမျိုးတို့အား ပစ်မှတ်ထားလျှက် နှိပ်ကွပ်မှုနှင့် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆင်တူနေကြောင်း တွေ့ရပြီး ရလာဒ်မှာလည်း ဆင်တူနေပေသည်။
= ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်အများစုမှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ ဖြစ်သည် =
အထက်လွှတ်တော်အမတ် အက်ဒွပ်ကနေဒီက သူ၏ အစီရင်ခံစာတွင် (၁၉၇၁)ခုနှစ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ထွက်လာသော ဒုက္ခသည်များနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားသည်။ (၁၉၇၁)ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၅)ရက်နေ့တွင် အရှေ့ပါကစ္စတန်ဒေသမှ ဒုက္ခသည် (၉.၅၄)သန်း အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ (၁၉၇၁)ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ပျဉ်းမျှ လူဝင်နှုန်းမှာ တစ်ရက်လျှင် ဒုက္ခသည် ၁၀,၆၄၅ ဦး ဖြစ်သည် (အညွှန်း – ၃)။ ထို့ကြောင့် (၁၉၇၁)ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက်တွင် ဖြစ်ပွားသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စစ်ပွဲ အစ၌ စုစုပေါင်း ဒုက္ခသည်အရေအတွက်မှာ (၁၀)သန်းခန့် ဖြစ်သည် (အညွှန်း -၅)။
အထက်လွှတ်တော်အမတ် ကနေဒီက ထပ်မံ၍ ဖော်ပြသည်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အစိုးရသည် အဆင်ပြေသော နေရာများ၌ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များနှင့် မူစလင်များအတွက် သီးခြားဒုက္ခသည်စခန်းများ တည်ထောင်ပေးထားရာ ဟိန္ဒူ ဒုက္ခသည်စခန်းများသည် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် အများစုရှိရာ ဒေသများ၌ တည်ရှိပြီး၊ အလားတူပင် မူစလင်စခန်းများသည် မူစလင် အများစုရှိရာ ဒေသများတွင် တည်ရှိသည်။ ဒုက္ခသည်တို့၏ အသိုက်အ၀န်းအလိုက် ကိုယ်စားပြုမှုမှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်း၊ မူစလင် (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်နှင့် အခြားသူများ (၅) ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည် (အညွှန်း – ၈)။
ဤအချက်က ဒုက္ခသည် (၁၀)သန်းအနက် (၈)သန်းသည် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုပေသည် (အညွှန်း – ၈)။ ဤအချက်ကို ထောက်ခံသော အခြားအချက်မှာ – အထက်လွှတ်တော်အမတ် ကနေဒီက ဒုက္ခသည်စခန်းများ၏ တာဝန်ခံ ကယ်ဆယ်ရေး အရာရှိ အကြီးအကဲများစွာအား မည်သည့်အရာသည် ချက်ချင်း အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်သည်ကို မေးမြန်းသောအခါ သူတို့၏ ဖြေဆိုချက်က “မီးသင်္ဂြိုလ်ရန်နေရာများ”ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ [ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ သေဆုံးသော မီးသင်္ဂြိုလ်လေ့ ရှိသည်။]
= ပျောက်ဆုံးနေသော ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ၂.၅ သန်း =
အဖွဲ့အစည်း အများအပြားက ပါကစ္စတန်စစ်တပ်၏ လူမဆန်သော ဖိနှိပ်မှုသည် ဘင်္ဂလီ (၃)သန်းကို သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ကြောင်း ပြဆိုကြသည်။ ဤခန့်မှန်းချက်ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အစိုးရကပင် ပေးထားခြင်းဖြစ်သည် (အညွှန်း – ၅)။ သို့ရာတွင် ကိုးကွယ်ရာဘာသာအလိုက် သေဆုံးသူတိုက ခွဲခြားရန်မှာ အလွယ်တကူ မဖြစ်နိုင်ပေ။
သို့ဖြစ်ရာ – ဇယား(၁)တွင် ပေးထားသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ လူဦးရေ အခြေပြုစာရင်းကို ကြည့်ကြပါစို့။
= ဇယား – ၁ =
အချက်အလက် ပင်ရင်း – ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအစိုးရ စီမံကိန်း ၀န်ကြီးဌာန၊ စာရင်းအင်း ဗျူရို မှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်အပေါ် အခြေခံထားသည်။ (အညွှန်း – ၉)
နှစ် — စုစုပေါင်းလူဦးရေသန်းပေါင်း — ဟိန္ဒူလူဦးရေ ရာခိုင်နှုန်း — ဟိန္ဒူလူဦးရေသန်းပေါင်း
← Nice Burmese Hip Hop Song: She’saGold Digger
ဝတပ်ဖွဲ့ – တရုတ် – မြန်မာ ဆက်ဆံရေး →